ပိန္နဲပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပိန္နဲ (Artocarpus heterophyllus) (jack tree) သည် သစ်သီးပင် မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ မိုးသစ်တောများနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့မှ ဇာတိမျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။ ပိန္နဲပင်သည် အပူပိုင်းဒေသမြေနိမ့်ပိုင်းများတွင် ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ထွန်းသည်။ ယင်းအပင်သည် အလေးချိန် ၅၅ kg (၁၂၀ ပေါင်) ရှိပြီး အလျား ၉၀ cm (၃၅ လက်မ) ရှိကာ အချင်း ၅၀ cm (၂၀ လက်မ) ရှိသည်။ သစ်သီးများအားလုံးထဲတွင် အကြီးဆုံးဟုဆိုနိုင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော ပိန္နဲပင်သည် တစ်နှစ်လျင် အသီး ၂၀၀ ခန့် သီးပြီး သက်တမ်းပိုရင့်သောအပင်သည် တစ်နှစ်လျင် အသီး ၅၀၀ ကျော်ခန့် သီးသည်။ ပိန္နဲသီးကို တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှဒေသများတွင် အချိုပွဲအဖြစ် စားသုံးကြသည်။
↑ Under its accepted name Artocarpus heterophyllus (then as heterophylla) this species was described in Encyclopédie Méthodique, Botanique 3: 209. (1789) by Jean-Baptiste Lamarck, fromaspecimen collected by botanist Philibert Commerson. Lamarck said of the fruit that it was coarse and difficult to digest. Larmarck's original description of tejas။ t.3။ Panckoucke;Plomteux။ 2012-11-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ On mange la chair de son fruit, ainsi que les noyaux qu'il contient; mais c'est un aliment grossier et difficile à digérer.
↑ Name - !Artocarpus heterophyllus Lam။ Missouri Botanical Garden။
↑ TPL, treatment of Artocarpus heterophyllus။ Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden (2010)။ 24 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Name – Artocarpus heterophyllus Lam. synonyms။ Missouri Botanical Garden။
↑ "Artocarpus heterophyllus"၊ Germplasm Resources Information Network (GRIN)၊ Agricultural Research Service (ARS), United States Department of Agriculture (USDA)၊ 2012-11-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Artocarpus heterophyllus Lam. — The Plant List။ Theplantlist.org (2012-03-23)။7May 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Artocarpus heterophyllus။ Tropical Biology Association (October 2006)။ 15 August 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Love, Ken (June 2011)။ Jackfruit။ College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii at Manoa။
↑ Boning၊ Charles R. (2006)။ Florida's Best Fruiting Plants:Native and Exotic Trees, Shrubs, and Vines။ Sarasota, Florida: Pineapple Press, Inc.။ p. 107။
↑ Elevitch၊ Craig R.; Manner၊ Harley I. (2006)။ "Artocarpus heterophyllus (Jackfruit)"။ in Elevitch၊ Craig R. (ed.)။ Traditional Trees of Pacific Islands: Their Culture, Environment, and Use။ Permanent Agriculture Resources။ p. 112။ ISBN 9780970254450။
↑ Jackfruit Fruit Facts။ California Rare Fruit Growers, Inc. (1996)။ 16 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The encyclopedia of fruit & nuts, By Jules Janick, Robert E. Paull, pp. 481–485
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပိန္နဲပင်&oldid=738667" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၅:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။